सरकारी कर्मचारीको शुरु तलबमानमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि !कसको तलब कति ? – " कञ्चनजंगा News "
सरकारी कर्मचारीको शुरु तलबमानमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि !कसको तलब कति ?
No Comments on सरकारी कर्मचारीको शुरु तलबमानमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि !कसको तलब कति ?
काठमाडौँ, जेठ १५ – नेपाल सरकारको विनियोजनबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ ।
आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कर्मचारीको शुरु तलबमानमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको घोषणा गर्नुभएको हो ।
उहाँका अनुसार आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी राजपत्राङ्कित श्रेणीका कर्मचारीका २० प्रतिशत र राजपत्राङ्कितको १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, प्राध्यापकको तलब वृद्धि भएको हो ।
सरकारले तीन वर्षपछि कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको हो । यसअघि अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेका सरकारकोतर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेले विसं २०७३ मा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुभएको थियो ।
सरकारले महङ्गीभत्ता, पोशाक सुविधा र जीवन बीमालाई भने यथावत राखेको छ । यसबाट कर्मचारीको मनोबल उच्च भई पेशागत निष्ठा बलियो हँुदै सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी गराउनुभयो ।
कर्मचारीको सरुवा पुरस्कार सजाय र वृत्तिविकास र क्षमता अभिवृद्धिलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष सञ्चालन गर्नका लागि संस्थागत व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।
राजपत्र अनंकित श्रेणी (अधिकृत तल)का कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत बढ्ने छ भने राजपत्राङ्कित (अधिकृत र त्यो भन्दा माथि) को तलब १८ प्रतिशतले बढ्ने छ। पोशाक भत्ता, महंगी भत्तालगायतका अन्य सुविधा भने यथावत रहने छ।
सरकारी कर्मचारीको तलब यो पटक तीन वर्षपछि वृद्धि भएको हो। शिक्षक, कर्मचारी, सेना, पुलिसलगायत सरकारी तलब खाने सबैको तलब २० प्रतिशतले बढ्ने भएको हो।
कसको तलब कति ?
बजेट भाषण अनुसार मुख्य सचिवको तलब ५५ हजार बाट बढेर ६५ हजार भएको छ। त्यसैगरी सचिवको तलब ५१ हजार बाट बढेर ६० हजार पुगेको छ त्यस्तै सहसचिवको तलब ४० हजार रुपैयाँ बाट बढेर ४७ हजार रुपैयाँ हुने भएको छ ।
त्यसैगरी उपसचिवको तलब ३४ हजार बाट ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ। शाखा अधिकृको तलब ३० हजारबाट बाट ३६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि २५ हजार ६ सय रुपैयाँ नायब सुब्बा (अतिरिक्त मान) को तलब ३० हजार आठ सय पुगेको छ।
नायब सुब्बाको तलब २३ हजारबाट २८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। खरिदार अतिरिक्त मान)को तलब २२ हजार ९ सय ७० बाट २७ हजार ५ सय ६४ पुगेको छ। २२ हजार रुपैया खरिदारको तलब २६ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ।
← भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन ओली बिहीबार दिल्ली जादै → १० करोड नपाएपनि एकै पटक २ करोड थपिएपछि अधिकांश सांसदहरु खुसी